Vanorwara neAsthma Vokurudzirwa Kuti Vagare Vakazvichengetedza muNguva yeChando
chekushandisa kufema kana kuti asthma inhaler.
Nyanzvi munyaya dzezvehutano dzichiri kuita ongororo yekuona kuti chirwere e chekutadza kufema zvakanaka zvichikonzerwawo nekuzvimba kwemapapu kana kuti asthma icho chinowanikwa muvana nemuvanhu kakuro chinokonzerwa neyi. Chirwere ichi chinowanikwawo mumhuri.
Nyanzvi munyaya dzezvehutano dzichiri kuzeya kuti chii chaizvo chinokonzera chirwere ichi chinozivikanwa kuti chinogona kuwanikwa mumhuri. Mweya unofema munhu unonziwo unogona kupa kuti agume aive nechirwere ichi. Kusafema mweya wakanaka muvana kana vakuru kunogona kukanganisa mapapu zvinozopa kuti munhu abatwe nechirwere ichi.
Nyanzvi munyaya dzezvezvehutano Dr Marian Kasekete vanoti chirwere ichi chinokonzera kuzvimba kwemapapu zvinopa kuti kufema kunetse.
Vanorwara neasthma vanowanzosimbirwa nechirwere ichi munguva ino yechando sekutsanangura kwemumwe murwere Amai Mercy Dzidzai Mashongwa.
Amai Estere Chatikobo vaudzawo Studio 7 kuti denda iri rakanganisa dzinza ravo sezvo hama dzavo zhinji dziine chirwere ichi.
Dr Kasekete vati pane mimwe mishonga inorerutsa marwadzo evane denda iri uye vanofanira kuitora mushure mekutaura navanachiremba vavo. Vanotiwo pane zvakawanda zvinopa kuti munhu asimbirwe zvakanyanya nechirwere ichi kana kuti asthma attack zvinosanganisira kufema mweya unetsvina nekutonhorwa zvakanyanya.
Nyanzvi munyaya dzezvehutano Muzvinafundo Elopy Sibanda vachinyora mune rimwe gwaro rebazi rezvehutano vakatiwo zvimwe zviratidzo zvekuti munhu ave kurwara neCovid 19 zvakafananawo nezviratidzo zveAsthma.
Musi wa5 Chivabvu gore roga roga, Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kucherechedza Zuva reWorld Asthma Day. Gore rino bazi rezvehutano rakakurudzira vane denda reasthma kuti vaendere mberi vachinwa mishonga yavo zvikuru munguva ino yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Kunyangwe zvichinzi nedzimwe nyanzvi vane Asthma vari munjodzi huru vakabatwa nechirwere cheCovid-19, pachiri kuitwa tsvakiridzo izere nenyanzvi. Vane chirwere ichi vanokurudzirwawo kutaura navanachiremba vasati vabayiwa nhomba yeCovid-19.
Ongororo yakaitwa nebazi rezvehutano inoratidza kuti huwandu hwevanhu vanorwara neAsthma hwakaderera kubva mukupera kwegore ra2019 kusvika gore ra2020. Zvinonzi kuderera uku kunogona kunge kwakakonzerwa nekurudziro yekuti vanhu vambogara mudzimba kana kuti lockdown.
Sangano reWorld Health Organisation rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu nemakumi matatu nemapfumbamwe, kana kuti 339 million, vanorwara nedenda reAsthma pasi rose.